Enweela ọtụtụ isiokwu na njem ndị na-azụ ahịa n'ime afọ ole na ole gara aga na otu ụlọ ọrụ azụmaahịa kwesịrị iji gbanwee dijitalụ iji nabata mgbanwe ndị na-azụ ahịa. Usoro nke onye na-azụ ahịa na-agagharị bụ akụkụ dị oke mkpa nke atụmatụ ahịa na ahịa gị niile iji hụ na ị na-enye ozi ahụ maka atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa ebe na mgbe ha na-achọ ya.
In Gartner si CSO melite, ha na-arụ a kediegwu ọrụ nke nkewa na ịmata otú B2B ndị na-azụ ahịa na-arụ ọrụ site na mbipụta site na ịzụta ihe ngwọta. Ọ bụghị ahịa olulu na ọtụtụ ụlọ ọrụ anabatala ma tụọ ihe. M ga-agba onye ọ bụla ume ịdebanye aha ma budata akụkọ ahụ.
Nchoputa Nsogbu - azụmaahịa ahụ nwere nsogbu na ha na-anwa imezi. Ihe ndị ị nyere n’oge a ga-enyere ha aka ịghọta nsogbu ahụ nke ọma, ọnụ ahịa nsogbu ha na nzukọ ha, na ịlaghachi na ntinye ego nke azịza ya. N'oge a, ha anaghị achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị - mana site na ịnọnyere ma na-enye ha nka ọrụ ha iji kọwaa nsogbu ha n'ụzọ zuru oke, ị na-eduga n'ọnụ ụzọ ámá dịka onye na-eweta ihe ngwọta.
Nchọpụta Ngwọta - ugbu a azụmahịa ahụ ghọtara nsogbu ya, ugbu a ha ga-achọ azịza. Nke a bụ ebe mgbasa ozi, ọchụchọ, na mgbasa ozi mmekọrịta dị oke mkpa maka ịkpọtụrụ nzukọ gị. Ga-enwerịrị ugbu a na nyocha na ọdịnaya dị ịtụnanya nke ga-enye obi ike na atụmanya gị chọrọ na ị bụ azịza ga-arụ ọrụ. Ga-enwerịrị ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na ndị na-akwado ya bụ ndị na-abịa ebe atụmanya gị na ndị ahịa na-arịọ maka ozi na mgbasa ozi mmekọrịta.
Chọrọ Building - azụmahịa gị ekwesịghị ichere maka arịrịọ maka nkọwa iji kọwaa otu ị si enyere aka mezuo ihe ha chọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere atụmanya gị na ndị ahịa aka dee ihe ha chọrọ, ị nwere ike ịga n'ihu asọmpi gị site na ịkọwapụta ike na uru ndị ọzọ nke iso ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ. Nke a bụ mpaghara m na-elekwasị anya na ndị ahịa anyị nyeere aka. Ọ bụrụ n ’ịrụ ọrụ siri ike nke inyere ha aka mepụta ndenye ndepụta ahụ, ghọta usoro iheomume, wee gụpụta mmetụta nke ihe ngwọta, ị ga-enweta ngwa ngwa na isi ndepụta ndepụta ahụ.
Nhọrọ Ndị Na-enye Aka - Ebe nrụọrụ weebụ gị, ọnụnọ ọchụchọ gị, mgbasa ozi mgbasa ozi gị, akaebe ndị ahịa gị, usoro ojiji gị, echiche echiche idu ndú gị, asambodo gị, akụrụngwa gị, na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ niile na-enyere aka itinye atụmanya gị iru ala na ị bụ ụlọ ọrụ ha chọrọ iji azụmahịa. Firmlọ ọrụ mmekọrịta gị na ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịnọ n’elu iji hụ na a na-akpọ gị aha gị mgbe niile n’akwụkwọ ụlọ ọrụ dị ka onye na-eweta ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa na-enyocha ndị na-eweta ya. Ndị na-azụ ahịa azụmaahịa nwere ike ịga na azịza nke anaghị akụ nyocha niile hit mana na ha maara na ha nwere ike ịtụkwasị obi. Nke a bụ oge dị oke egwu maka ndị ahịa gị.
Nkwado Ngwọta - Ndị nnọchi anya mmepe (Bdr) ma ọ bụ ihe nnọchianya mmepe (SDR) bụ nna ukwu iji kwado mkpa nke onye ahịa na ịtọbe atụmanya na ikike ha ịnyefe azịza ya. Ihe omumu nke kwekorita na ulo oru gi na ntozu gi di nkpa n’ebe a ka ikwe ka olile anya gi hu na osisa gi gha enyere nsogbu ha. Ndị ụlọ ọrụ nwere akụrụngwa nwere ike itinye ego na prototypes n'oge a ka ikwe ka atụmanya ahụ hụ na ha echebarala azịza ya echiche.
Usoro ndị a anaghị agba oge niile. Ulo oru a gha aru oru site na uzo ozo ma obu karia, gbanwee ihe ha choro, ma obu gbasaa ma obu mechie anya ha dika ha na aga n'ihu ahia. Gbaa mbọ hụ na ire ahịa gị na ire ahịa gị kwekọrịta ma na-eme mgbanwe iji nabata mgbanwe ndị ahụ dị oke mkpa maka ọganiihu gị.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa B2B na-amachi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ha maka ndị ahịa na-atụ anya site n'ilekwasị anya na nhụta ha nke ịbụ ndị achọtara dịka onye na-ere ahịa nke nwere ike inye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ọ bụ usoro amachi n'ihi na ha anọghị n'oge mbụ na usoro ịzụ ihe.
Ọ bụrụ na azụmahịa na-enyocha ihe ịma aka ha nwere, ha anaghị achọ ụlọ ọrụ iji ree ha ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Imirikiti nke nke B2B Buzụta njem na-ebute ụzọ nhọrọ ndị na-ere ahịa.
Ikpe n’okwu; ikekwe enwere onye ahịa ga - arụ ọrụ na Teknụzụ Ego na - achọ ijikọ ahụmịhe mkpanaka na ndị ahịa ha. Ha nwere ike ịmalite site na nyocha ụlọ ọrụ ha na otu ndị ahịa ha ma ọ bụ ndị na-asọmpi na-etinye ahụmịhe mkpanaka na ahụmịhe ndị ahịa ha.
N'oge a, ọ ga - abụ ihe dị egwu ma ọ bụrụ na azụmahịa gị - onye mepụtara njikọta siri ike maka ụlọ ọrụ Fintech nọ na - enyere ha aka ịghọta nsogbu nke nsogbu ahụ? Azịza dị mfe bụ ee. Ọ bụghị ohere iji kwalite ihe ngwọta gị (mana), ọ bụ naanị inye ha nduzi iji nyere ha aka ịga nke ọma n'ọrụ ha yana n'ime ụlọ ọrụ ha.
Ekwesịrị itinye usoro nke a n'ọbá akwụkwọ ọdịnaya gị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụlite kalenda ọdịnaya, bido n’usoro nke njem ndị ahịa gị bụ ihe dị mkpa na atụmatụ gị. Nke a bụ nnukwu ihe atụ nke ihe ahụ yiri site na Gartner's CSO Update:
A ghaghị ịhazi ọbá akwụkwọ ọdịnaya gị nke ọma, dị mfe ịchọpụta, akara aka oge niile, edere ya n'ụzọ doro anya, nwee nyocha na-akwado ya, ga-adị n'ofe ndị na-ajụ ase (ederede, onyonyo, vidiyo), ọtụtụ ga-adịkarị mma maka mkpanaka, ma nwee mmetụta dị mkpa maka ndị na-azụ gị. na-achọ.
Ebumnuche zuru oke nke mbọ ị na-agba n’ahịa kwesịrị ịbụ na onye na-azụ gị nwere ike ịga n’ihu dịka ọ ga-amasị ha n’ịga njem onye ahịa na-enweghị mkpa ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ gị. Atụmanya ga-achọ n'ụzọ dị ukwuu gabiga usoro ndị a na-enweghị enyemaka nke ndị ọrụ gị. Mgbe ị na-ewebata ndị ọrụ gị n'oge gara aga, ọ ga - abara gị uru.